Ngwa 600A USB Ndị na-emepụta na ndị na-eweta ya | China 600A USB Ngwa Factory
600A 15kV ihe omimi nke ihe eji egbu mmadu
Anhuang amachibidoro na ihe ndi mmadu na-egbu egbu, anyi na enye ezigbo mma ihe ndi mmadu. General ： 600A Integral Nwụrụ Anwụ ma ọ bụ Vacuum Switch Bushing ezubere maka Cable Alaka Cabinet na Sf6 Loadbreak mgba ọkụ. Enwere ike iji njikọ njikọta, dịka 600A T na T-11 njikọta ndị nwụrụ anwụ nwere ike iji bushing ndị a. Ọ bụ Epoxy Resin na-eme osisi a. Na uwe mwụda na-eme ka Ndị Nwụrụ Anwụ agbaji Rotatable Nri-thru Bushing nwere ike iji mee ihe ka mma. Ihe di n'ime ya ： nt lntegral Deadbreak Bushing ● I ...
600A Deadbreak ịkụ gọlfụ njikọ
Anhuang ọkachamara na Mgbapụta Tkụ Tee Pịa njikọ, anyị na-enye nnukwu mma Deadbreak ịkụ gọlfụ Mgbata njikọ. Structure: Ijikọ ịghasa: tin-plated ọla kọpa abụọ-isi ịghasa, na casing iji hụ nso nchikota. Crimp ọnụ: Dabere na eriri ihe, họrọ ọla kọpa crimp ọnụ ma ọ bụ ọla kọpa-aluminum crimp ọnụ. Ngalaba nke semiconducting nke a na-eme: na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-aga n'ihu.
600A Specific anwụrụ ọkụ Junction
Anhuang ọkachamara na Mee busbar, anyị na-enye elu mma Specific deadbreak nkwụsị. General ： 200A / 600A Specific deadbreak Junction na-enye abụọ, atọ ma ọ bụ anọ 200A ibu ezumike na 600A ọnwụ ezumike, 15kV ngwakọta agwakọta n'otu akụkụ na-arụkọ ọrụ ọnụ na izute ihe niile chọrọ ANSI / IEEE 386-Separable Insulated Connector Systems. Mgbe ejiri ya na ngwaahịa ejiri tụnyere ya, ntughari a na-enye ya ihe nchebe zuru oke, nke zuru oke, nkewa maka nkewapu ibu ma obu onwu ...
15kV24kV 600A nkwụsịtụ Busbar nkwụsị
Anhuang ọkachamara na nkwụsị nkwụsị Nwụrụ Anwụ, anyị na-enye elu mma Nwụrụ Anwụ nkwụsị. General ： 600A Nwụrụ Anwụ nkwụsị nkwụsị na eriri alaka eriri na-arụ ọrụ ụgbọ ala. Ihe e ji mara ya bụ ihe mkpuchi zuru oke, mechie ya nke ọma. 600A busbar nwere ike njikọ eriri USB, njikọ njikọ T-II, eriri mgbakwunye 600A na okpu mkpuchi nke 600A nwere ngwongwo nke eriri ọtụtụ ngalaba. Oghere uzo ogwugwu 600A nke ihe eji eme ihe di elu. Ihe di n'ime ya ● bar Busbar body ● Insta ...
15kV 600A gwara mmanụ okpu
Anhuang ọkachamara na mkpuchi mkpuchi mkpuchi, anyị na-enye ezigbo mkpuchi mkpuchi mkpuchi dị elu. Okwu mmeghe ： 15kV / 24kV 600A mkpuchi mkpuchi bụ ngwa ngwa eji aka ya rụọ ọrụ na eletriki eletriki yana mechie mkpọtụ nkwụsị ihu. Mgbe mated ka a ibu ezumike ngwaahịa na igbapu waya na mmasị na ala, na gwara mmanụ okpu okpu enye a n'ụzọ zuru ezu echebekwa, submersible egbochi ihe mkpuchi maka ume bushings. The gwara mmanụ echebe Cap nwere ike iji ...
15kV24kV 600A nwụrụ anwụ ezumike T Ijikọ nkwụnye
Anhuang bụ ọkachamara na plọg maka ịkụda akụ, anyị na-enye nnukwu mma Deadbreak ịkụ gọlfụ pug njikọ. General ： 600A Nwụrụ Anwụ T Njikọ Plọg na-eji jikọọ abụọ ma ọ bụ karịa 600A nwụrụ anwụ ezumike terminators. Nwụrụ Anwụ Njikọ plọg na-ejikarị na a separable splice, ma ọ bụ na a bushing extender, dịkwuo anya si ngwa n'ihu efere na 600A terminator, easing USB ọzụzụ. A na-akpụzi ikikere nkwonkwo aka site na iji sọlfọ siri ike gwọọ ma na-eduzi ...
600A Loadbreak Mbelata Mgbata nkwụnye
Anhuang ọkachamara na Loadbreak Mbelata Mgbata Nkwụnye, anyị na-enye elu mma Loadbreak Ibenata mmata nkwụnye. General: 600A / 200A Integral Nwụrụ Anwụ Bushing na-eji iji tọghata ọkọlọtọ 600A nwụrụ anwụ ezumike interface ka a ọkọlọtọ 200A ibu ezumike interface. Ejiri ya na okpu mkpuchi 200A, MOV Elbow Arrester, Elbow Connector, Grounding Elbow ma ọ bụ Ibu Ibu Elbow Connector, Nnukwu ihe nkwụsịtụ nke ịnwụ anwụ na-enye nchebe zuru oke. Ọ ga-abụ T-ne njikọta ma ọ bụrụ na jikọọ na T njikọ. Ihe di n'ime: Loadbreak Re ...
600A T Deadbreak njikọ
Anhuang pụrụ iche na njikọ njikọ njikọta, anyị na-enye nnukwu mma Njikọ Njikọ Nwụrụ Anwụ. Mmejuputa atumatu: ● Ihe ntanye njikọ njikọta maka iche maka usoro nkesa n'elu; ANSI / IEEE Std386-2006600V posed Egosiputa jaketị semiconductor maka akwa eletriki USB na njikọta a na - ekewapu iche; Cab Ọdụ eletrik ndị a gwara mmanụ na ngwa ha nwere ikike dị elu karịa 1 kV (Um = 1.2 kV) ruo 30 kV (Um - 35 kV); Usoro nyocha maka ngwa maka ike ca ...